March 1, 2021 - समृद्ध नेपाल
एचआईडिसिएलको सिईओमा कुलमानलाई नियुक्ती गर्ने तयारी !
हाइड्रोइलेक्ट्रसिटी इन्भेष्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी एचआईडिसिएलको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुतिको प्रक्रिया अघि बढेको छ। जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गर्ने उदेश्यसहित स्थापना भएको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति समग्र जलविधुत छेत्रको विकासमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई निकै महत्वकासाथ हेरिएको छकम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दक्ष अनुभवी तथा योग्य ब्यक्तिको नियुक्ति गर्नु पर्नेमा गम्भिर छलफल भईरहेको वुझिएको छ। जसका
‘यो माया नै हो’मा श्वेता र सिमरनको अभिनय !
गायक प्रज्वल श्रेष्ठको स्वर रहेको नयाँ गीत यो माया नै हो सार्वजनिक भएको छ । म्युजिक भिडियो सहित गीत सार्वजनिक भएको हो । गीतमा शब्द सङ्गीत समेत प्रज्वल श्रेष्ठकै रहेको छ । गीत गायनमा प्रज्वललाई विधान प्रधान सिओडीले साथ दिएका छन् प्रेमकथा समेत बुनिएको गीतको भिडियोमा श्वेता मिश्रा र सिमरन शाक्यको अभिनय छ । अनिल
बिर्सियौमा सुनिल र प्रियाको अभिनय !
बद्री पंगेनी र मिलन नेवारले स्वर दिएकाे बिर्सियौं बोल गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ धेरै पढिएकोदि भ्वाइस अफ नेपालबाट आस्था आउट तृष्णा इन चोरी भयो छ माया छपक्कै मनोज गजुरेलकी पूर्वपत्नी मीनाको मार्मिक प्रेमपत्रसुनिल क्षेत्री र प्रिया अधिकारीको अभिनय रहेको म्युजिक भिडियो युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको होभिडियोको निर्देशन र कोरियोग्राफी पनि सुनिलले नै गरेका छन्। ज्ञानेन्द्र
विसं २०७८ मा तीन दशैँ परेको छ। यो वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने दुई वटा चैते दशैँ परेको छ।वैशाख ७ गते मङ्गलबार चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैँ परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृत गरेको पात्रो (पञ्चाङ्ग) मा उल्लेख छ। यसैगरी विसं २०७८ को चैत २६ गते शनिबार पनि अर्को चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते
एक परिवारले हिउँले करीव ७७ फिट लामो सर्प बनाए !
अमेरिको कोलोराडोमा एक परिवारले हिउँको सर्प बनाएको छ सोम मुजली र उनका पाँच भाई बहिनीहरूलाई उक्त विशाल बरफ सर्प बनाउन १०घण्टा लागेको जनाइएको छ। यो भन्दा अगाडि सन २०१९ सालमा उक्त परिवारको हिउँ कला प्रसिद्ध भएको थियो । ति परिवारले बरफबाट एक शानदार बाघ बनाए जुन स्थानीय मिडियामा राम्रोसँग देखाइएको थियो।यस पटक ति परिवारले बनाएको
जोमसोम बजारमागीतका सर्जक थकालीको दुखद निधन !
हिमाली जिल्ला मुस्ताङको जोमसोम चिनाउने मुस्ताङी एक सर्जकको शनिबार अमेरिकामा निधन भएको छ। झन्डै साढे दुई दशकअघि सर्वाधिक लोकप्रिय ‘जोमसोमै बजारमाबाह्र बजे हावा सररए हजुर घर हाम्रो पोखरा’ गीतका सर्जक तथा संगीतकार विश्व थकालीको अमेरिकामा हृ#दयघातका कारण निधन भएको उनका भान्जा अदित थकालीले जानकारी दिएलामो समयदेखि अमेरिका बसोबास गर्दैआइरहेका सर्जक थकालीको पुर्ख्यौली घर मुस्ताङको घरपझोङ
लसुनलाई आफ्नो पकेटमा राख्नुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ यस्तो चमत्कार !
१लसुनलाई पकेटमा राख्नु निकै शुभ मानिने गरिन्छ। त्यसैले कयौँ मानिस सौभाग्यका लागि लसुनलाई आफ्नो खल्तीमा राख्ने गर्दछन्।२लसुनलाई सुत्नुअघि सिरानी मूनी कतै जाँदा पकेटमा राख्दा आसपासको सकारात्मक उर्जा संचार हुने गर्दछ। लसुनले नकारात्मक उर्जा नष्ट गर्ने गर्दछ।३कुनै व्यक्ति लसुनको प्रयोग धूपदान भाडा सफा गर्नका लागि प्रयोग गर्ने गर्दछन्। किनकी यसबाट नकारात्मक शक्ति हटोस्।४सुत्नुअघि आफ्नो सिरानी मूनी
उदयपुरको बेलका नगरपालिका–९ बाट अवैध काठ सहति दुई जनालाई प्रहरीले नि-यन्त्र-णमा लिएको छ । आईतबार साँझ अवैध काठ चोरी निकासी गरिरहेको अवस्थामा उनिहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले नियन्त्रणमा लिएको हो मदन भण्डारी राजमार्ग जरायो खोलास्थित स.१ त.७९१६ नं.को ट्याक्टर पश्चिम तर्फबाट पूर्वतर्फ लोड गरी तस्करले लग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ पक्राउ पर्नेमा
एस्तो हुन्छ कलेजो बिग्रिएको थाहा पाउने ५ संकेत !
कलेजो शरीरको छालाभन्दा दोस्रो ठूलो अंग हो । अन्य अंगहरु जस्तै कलेजो पनि शरीरको महत्त्वपूर्ण अंग हो । यसको सम्बन्ध पाचन प्रक्रियासँग हुन्छ । कलेजोले काम गर्न छोड्यो भने मानिसको निधन हुन्छ स्वस्थ मानिसको कलेजोको तौल १.३देखि १.६किलोग्राम हुन्छ । रातो खैरौ रङमा हुने मानव शरीरको यो अंगले शरीरमा भएको विष वा विभिन्न रसायनलाई फिल्टर
मोटोपना, ग्यास्ट्रिक र अल्सर भएका बिरामिका लागि डल्ले खुर्सानी खानुका यस्ता छन् कयौ फाइदाहरु !
डल्ले खुर्सानी स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ यसको सेवन प्राय मानिसहरको भान्सामा हुने गर्दछ । खुर्सानि सानो बोटमा फल्ने गर्दछ ।यसको सेवन गर्दा धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ । यसको सेवन गर्दा हाम्रो शरीरलाई हुने फाइदा यसप्रकार छन् खानाका परिकारलाई स्वादिष्ट बनाउन खुसार्नीको प्रयोग गर्छौं । त्यसमा नि डल्ले अर्थात